Google mandefa ny fijerin'ny fiantsenana ... ary mahafinaritra izany! | Martech Zone
Google mandefa ny fijerin'ny fiantsenana… ary mahatalanjona!
Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo orinasa lehibe niarahanay niasa dia nanana olana izay tena mahazatra amin'ny ankamaroan'ny orinasa nasionaly. Amin'ny maha mpivarotra antsika, dia mifantoka amin'ny asanay izahay toy ny hoe tsy misy fetra ara-jeografika na fiovana rehefa mandeha ny fotoana - fa ny zava-misy dia samy misy fiatraikany lehibe. Raha afaka manoratra atiny amin'ny lohahevitra izay manararaotra ny fizaran-taona, ny fironana ankapobeny ary ny jeografia ianao, dia mety hahomby kokoa ny atiny.
Google dia vao nanomboka Fahatakarana fiantsenana izay ahafahanao mamakafaka ny haben'ny karoka rehefa mandeha ny fotoana sy ny hakitroky ny jeografika. Ohatra, ity misy ohatra iray amin'ny fikarohana amin'ny fiantsenana takelaka manerana an'i Etazonia:
Azonao atao ihany koa ny mahazo granular amin'ny fikarohana, ara-jeografika, hatrany amin'ny ambaratonga voafetra. Mety ho tena manampy amin'ny fandaniam-bolan'ny dokam-barotra sy ny fanaingoanao ny doka anao izany.
Ary mazava ho azy, manome fikarohana be mpitia ihany koa izy ireo isam-bolana sy taona azonao zahana.
Tags: ecommercegoogle fahitanafahitana amin'ny fiantsenana googlefiheverana miantsena
WebSite X5: Manangana, manaparitaka ary manavao tranokala amin'ny Desktop